Ikhaya lakho elivela kwiKhaya laseMazantsi-mpuma
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguFran & Clare
IWood Lodge likhaya eliziphekelayo elinabo bonke ubomi obutofotofo bemihla ngemihla, igadi enkulu ebiyelweyo, indawo yokungena yabucala kunye nemithwalo yokupaka.
Idolophu yentengiso yaseAthy ikumgama nje wemizuzu emi-5, iKildare Luxury Shopping Village 20 mins kunye neDublin okanye Kilkenny 50 mins. Imizuzu nje emi-3 ukusuka ku-M9 ekuPhumeni 3 kwindawo yayo esembindini iyenza ibe sisiseko esifanelekileyo kwiindwendwe eziya eMazantsi-mpuma.
Ukuba ufuna ukusebenzela ekhaya ine-WIFI yasimahla enesantya esiphezulu sebroadband.
Indlu enamagumbi okufudumeza okusembindini kuyo yonke inamagumbi okulala ama-3 amabini, i-ensuite enye kunye negumbi losapho olunye. Ukuba ulungiselela ukupheka ikhitshi inesitovu seRayburn Range, ioveni yombane kunye nesitovu. Igumbi lokuhlala elinesilingi yalo yoqobo eyakhiweyo kunye negumbi lokuhlala zombini zixhotyiswe ngezitovu zamaplanga ezibaswayo (amafutha anikezelweyo).
Ukuba uya kumsitho kwindawo iKilkea Castle Hotel, Burtown House kunye neClonard Court Hotel zonke zingaphakathi kwe-10 mins uqhuba. IAthy yidolophu yelifa enezinto ezininzi ezinomtsalane kubandakanya iMyuziyam yase-Earnest Shackleton. I-hinterland ejikelezileyo ityebile kwiindawo zembali kwaye kunye neentaba zeWicklow kanye emnyango wakho akukho kunqongophala kweendawo ezinomdla zokuzibona.
Kukho iikhosi ezininzi zegalufa zobuntshatsheli ekufikeleleni ngokulula.
Umbuki zindwendwe ngu- Fran & Clare
Ababuki zindwendwe bakho bahlala kufutshane kwaye nayiphi na isoloko ifumaneka ngexesha lokuhlala kweendwendwe zabo. Abalindi bomlilo, ibhedi yomntwana kunye nesitulo esiphezulu zonke ziyafumaneka xa ziceliwe.
UFran & Clare yi-Superhost